गफ ! .....: गफ : घर जाने कुरा
Posted by दीपक जडित at 1:35 AM
जे भएनि सातवर्ष पछि घर फर्कदै हुनुहुन्छ। तपाईलाई स्वागत छ। तपाईले छाडेर गएको मुलुक आउँदा अवश्य नै फरक भेट्नुहुनेछ। तपाईको यो टाँसो पढेपछि कताकता आफ्नो घरलाई आफैलाई टिठाएको अनि आफ्नै घर बिरानो भएको र आफू साँच्चैको परदेशी भएको भान दिलायो।
Have nice journey and Welcome Back to you Dipak ji
निकै आत्मीय लाग्यो यो टाँसो! मलाई पनि यस्तै लाग्छ र 'परेदेशी' भन्ने एउटा कवितामा यस्तै-यस्तै भाव पोखेको छु मैले पनि।
गजल झन् मर्मस्पर्शी लाग्यो। मनलाई धेरै बेर तरंगित बनाईरह्यो।
शुभ यात्रा! तपाईँको नेपाल बसाई सुखमय रहोस्!
Nepal aama lai sodheko chha aani dherai samjhana chha bhani dinu hola hai.
शुभ-यात्रा । एक हरफ थप्न मन लाग्यो ;
बाबाको आलो घाउबाट कति बगे अरे पिपहरु,
मन कसरी सम्हालुंला अब, सुनेर सुन्तलीको गानोको कथा ।
मन छुने गजल अनि यो टाँसो । शुभयात्रा जडित जी
हार्दिक स्वागत दीपकज्यू ।
सात वर्षपछि तै तीन महिनाको समय मिल्यो, यही नै वेश भो । धेरै चोटि हुन्छ जीवनमा यस्तो, सामान्य कुरामा पनि आफू नाजवाफ भइन्छ, चाहे त्यो आफ्नै कुरा किन नहोस् । ख्यालै नगरेर छुटिरहेको हुन्छ । मार्मिक लाग्यो यहाँको अनुभूति । हामी गाउँदेखि पर राजाधानीमा टाढा रहेर पनि भक्कानिन्छौँ, परदेशमा त झन् व्यथा पनि उखरमाउलो हुँदो हो ! तै 'कुनै पनि कुराप्रति बढ्ता लगाव नराखी बाँच्ने बल' सँगाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
तीन महिनाको नेपाल बसाइ खुसीदायक र सुखद दुवै होस् ।
मेसो मिलेमा भेट पनि होला नै ।
कुराले मेरो पनि मन छोयो तर कहिले कही माया गर्ने हरु को लागि आती स्वर्थी भये जस्तो लगेन?
अहो, असाध्यै मनछुने किसिमले लेख्नुभएको रहेछ | माया नमार्नुहोला है, देश फर्केपनि | शुभकामना !
मन अब्यबस्थित भएपनि दीपकजी कहिले कहिले यस्तैहुन्छ। मलाई,तपाईंलाई र अन्य साथीहरुलाई। मनका कती पीर र ब्यथाहरुलाई बिर्सिएर अब नयाँ जोस,नया जागरलाई फुलाउनु पर्छ। छिट्टै फर्कनुहोला मनभरी खुशीलिएर। ऐलेलाई शुभयात्रा।
'ओई मन घरजाने कुराले तेरो मन चौ चौ भएको छैन?' तर मन भोली हिंड्नु छ भनेरै ढुक्क छ । हिंड्ने बेलामा मन उत्तेजनाले तरँगित हुने अवस्था काटिएको हो त जिन्दगीमा ? प्रश्न त यस्तो पो बनाउँछ मनले बरु ।
कति छोयो.. कतै बोलि नै नफुट्ला जस्तो भयो ।